3 Waxyaabaha Muhiimka ah ee Xusuusta u ah Blogging B2B | Martech Zone
Wednesday, September 19, 2007 Axad, Juun 7, 2013 Douglas Karr
Diyaarinta Suuq Geynta Profesar Shirka Ganacsiga Magaalada Chicago, waxaan go aansaday in aan hoos u dhigo tusaalahayga bandhigga ugu yar. Bandhigyo leh tan oo dhibco rasaas ah ayaa ah IMHO, cabsi badan oo booqdayaashu si dhif ah u xasuustaan ​​wixii macluumaad ah ee la soo bandhigay.
Taabadalkeed, waxaan rabaa inaan xusho seddex erey oo ku dhagan madaxa suuqleyda markay tahay B2B hubkaa. Sidoo kale, waxaan rabaa inaan dalbado muuqaalo adag si dadku u xasuustaan ​​fariinta.
Waxaan doortay sawir ah Seth Godin. Dadku way ixtiraamaan Seth maxaa yeelay isagu waa hogaamiyaha fikirka ee warshadaha Suuqgeynta iyo Xayeysiinta. Seth wuxuu ka dabbaalaa kan hada jira wuxuuna heystaa hadiyad uu si cad ugu tilmaamayo guuldarada xaalada taagan. Wuu naga dhigayaa inaan ka fikirno. Qof kastaa wuu ku qanacsan yahay hoggaamiyaha fikirka oo loo aqoonsado inuu yahay mid aad ugu fiican ganacsigaaga. Balooggu waa dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo lagu aqoonsado inuu yahay hoggaamiye feker.
Dadku ma jecla akhrinta ereyada bogga, waxay jecel yihiin maqalka codka qofka. Xaaladda marka la eego, muuqaalkan yar ee Jonathan Schwartz, Blogger iyo Maamulaha Sun Microsystems vs. Samuel J. Palmisano, Guddoomiyaha Guddiga, IBM - oo fiirinaya tirada bogagga xiriiriyeyaasha bogaggooda.
Xaqiiqdii ma aanan ogeyn cidda uu yahay Guddoomiyaha Guddiga ee IBM markii aan baaray tan.
Ereyga ugu dambeeya waa cabsi. Waa waxa ka joojiya ganacsiyada badankood inay sameystaan ​​baloog iyo inuu socdo. Cabsida luminta xukunka astaanta, cabsida faallooyinka xun, cabsida dadka oo farta ku fiiqaya oo qoslaya, cabsida runta oo la sheego. Xogta qaarkood waxay tilmaamayaan sida cabsidu u baabi’ineyso awooda noocyada qaar soo jiidashada akhriska iyo dareenka. Qaar ka mid ah tirooyinka kale waxay tilmaamayaan shirkadaha ka adkaaday cabsidooda oo halkaas u wada dhigaya inay dadku dheef shiidaan… waana ku guuleysanayaan taas darteed.
Cabsidu waligeed istiraatiijiyad maleh. Qof baa mar igu yiri marna orod kuma ordi kartid markii aad had iyo jeer gadaashaada eegayso. Shirkado aad u tiro badan ayaa amni darro ah waxayna ka baqayaan waxa aan la aqoon. Waxyaabaha layaabka leh ayaa ah in cabsidooda ugu weyn ay u badan tahay inay rumowdo maxaa yeelay kama aysan adkaan.
Tags: hubkaa b2b
Verizon Wanaag Ayuu Sameeyay Maanta! AT&T Maaha Aad U Fiican…
Sep 20, 2007 at 12: 43 AM
Dhammaan seddexda shey ee aad sheegtey waxay ahaayeen mawduucyo looga hadlayo shirkadayda. Waxyaabaha qosolka leh ayaa ah qodobka 1 iyo 2 waa wada hadal fudud. Qof kastaa wuxuu caadi ahaan ku yaal isla bogga oo wuxuu u aqbalaa inay run yihiin. Qodobka 3-aad, si kastaba ha ahaatee, wuxuu ahaa arrin dib u soo noqnoqotay muddo dheer. Dadku waxay umuuqdaan inay helayaan ama aysan helin. Kuuma sheegi karo inta jeer ee mowduucyada faallooyinka xun ay ku soo kordheen sabab aan u ahayn nooc ka mid ah baraha bulshada. Xitaa xitaa waxay u socotaa sida cabsida laga qabo tartame inuu waxyeelleeyo annaga oo soo dhejinayna been * taaha *. Halganku wuu socdaa.
Sep 20, 2007 at 7: 23 AM
Warka fiicani waa in aanu jirin sharci cayiman oo ku saabsan kormeerka faallooyinka barta ganacsiga ee b2b. Way u fududdahay sidii loo dejin lahaa 'sharci wanaagsan' halkaasoo dhammaan faallooyinka la dhexdhexaadinayo oo loola jeedo faallooyinka la iska indhatiray ama looga jawaabay shaqsiyan. Waxaan haystaa in kabadan 3,000 oo faallooyin ah oo ku saabsan boggeyga oo kaliya waxay ahayd inaan qoro 2 qof oo aan u sheego inaanan dhajin doonin faallooyinkooda.
Kaliya iska hubi inaad dadka u ogeysiiso xagga hore - kani waa baloog ganacsi si uu ugu furo wada xiriirka macaamiishaada una helo xalal - maahan madal furan oo shirkadda lagu kala jajabinayo. Sidoo kale, haddii kuwani ay yihiin macaamiil xanaaqsan, fursadda ah in dib loogu qoro shaqsiyan oo laga caawiyo inay soo baxaan ayaa laga yaabaa inay dib u noqdaan!
Dhex-dhexaadintu waa muuqaal weyn oo ka mid ah barxad kasta oo wax lagu qoro. Iyadoo la adeegsanayo B2B blog, waan ku adkeynayaa!
Arrin la yaab leh, arrinta ku saabsan dayacnaanta ganacsiga ayaa ah in dadku aysan u arkin ganacsiyada 'dad'. Marar dhif ah ayaa qof kula hadlaa qof sida ay u qori lahaayeen ganacsi. Waxaan ka hadlayaa waaya aragnimo s Ganacsi baan dili doonaa markaan buuxiyo foomkooda 'nala soo xiriir', laakiin markaan taleefanka la soo galo waxaan ogahay inta badan qofka qaladkiisa kuma lihi dhinaca kale waana hoos u dhigayaa. .
Haysashada baloog waxay macaamiisha siisaa qof ay arkaan oo ay bartaan - yareynta halista ay ku bilaabi karaan dagaal khadka tooska ah.
Sep 20, 2007 at 1: 33 PM
Waad ku mahadsantahay jawaabta. Waxaad soo qaadatay qodob wanaagsan. Waxaan u janjeeraa inaan ku biiro "faallooyinka aan dhexdhexaadka ahayn" ee warbaahinta bulshada. Waxaan kaliya dareemayaa inay siinayso dareen xoog ah aqristaha / macaamilka qaybta warbaahinta. Tani, shaki la'aan, waxay gacan ka geysaneysaa cabsida ka dhex jirta shirkadeyda. Malaha waa inaan jilciyaa habka aan wax u wado.